मंसिर ९, काठमाण्डौँ ।
कथामा एक महिलाको बुढेसकालमा छोरो जन्मन्छ । छोरो जन्मेको केही समय नबित्दै उनका श्रीमानको मृत्यु हुन्छ । वरवर आफन्तको नाउँमा कोही हुँदैन । बाँच्ने साहाराको नाउँमा एउटै छोरो हुन्छ ।छोरो नै उनको मुटुको धड्कन ! एक दिन त्यो छोरोलाई हनहनी ज्वरो आउँछ र एकैदिनको ज्वरोले छोराको मृत्यु हुन्छ ।
संयोगले गौतम बुद्ध त्यही गाउँमा ध्यान शिविर चलाउँदै आएका थिए । कोही दयालुले ती दुःखी बुढीआमाको दु:ख हेर्न नसकेर गौतम बु द्धको शरणमा पुर्‍याइदिए ।
त्यसैगरी दुःखमा रुँदा तपाईंलाई कसले के भन्छ ? रुनु र हाँस्नु स्वाभाविक श्वासजस्तै हुन् प्रचण्डज्यू । प्रिय प्रचण्डज्यू, तपाईको आँखाबाट बगेको आँशुले विगतका सबै क्लेश, मोह र पूर्वाग्रह पखालियुन् ।
लेखक शीतल दाहाल अनलाइन खबरबाट साभार